ကွတ်ကျွန်းစုဓာတ်ပုံရီးရဲလ်ရှုခင်း DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 260 ကို MB
downloads ရယူရန္ 23 238
အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုများကဤလှပသောကျွန်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူဗိုလ်ကြီး James Cook ကနေသူတို့နာမယူပါ။ လွတ်လပ်သောပေမယ့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ဘဏ္ဍာရေး, နယူးဇီလန်မှပိုင်ဆိုင်သည်, ကွတ်ခ်ကျွန်းစုကျွန်းစု 15 ကျွန်းများမြောက်ဘက်နှင့်မြင့်မားတောင်ဘက်မီးတောင်ကျွန်းများသို့ခွဲခြား atolls ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုတစ်အိပ်မက်အားလပ်ရက်ဆက်ကပ်။ အဆိုပါကျွန်းများ 2.2 သန်း km2 ၏စုစုပေါင်းဧရိယာကျော်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ သစ် Polynesian ပရဒိသုမှကြိုဆိုပါ၏!
ဤအကွတ်ကျွန်းစု photoreal ပုံရိပ်တွေကနေ resolution ကို 1m / pixel နှင့်အတူကျွန်းစု၏အားလုံးပါဝငျသောထိပ်တန်းဗူးဖြစ်ပါတယ်။ အဘို့ FSX & P3D တိဗေရိ Kowalski အားဖြင့်
ရှုခင်းအတွက်ကျွန်းများဖြစ်ကြသည်: Manihiki, နာဆော, အဘိဓါန် Penrhyn, Pukapuka, Suwarrow နှင့် Rakahanga, Aitutaki, Atiu, Mangaia, Manuae, မောက်, Mitiaro, Palmerston, ရိုတန်းဂါနှင့် Takutea ။
ဤအအိပ်မက်ကျွန်းများ၏တဦးတည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်လေဆိပ်ရဲ့ရွေးချယ်ရေးဖွင့်လှစ် FSX/P3D နှင့်နိုင်ငံလယ်ပြင်၌ "ကွတ်ကျွန်းစုများ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
Rikoooo နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အားလပ်ရက်အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးပဲ!
သတိပြုရန်ကြီးမားတဲ့ဖိုင် 260 ကို MBထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).
Author: တိဗေရိ Kowalski
နယူးမက္ကစီကိုရှုခင်းအထုပ် v2 FSX & P3D